Tel Aviv dia nantsoina hoe tanàna vaovao lafo indrindra eran-tany hipetrahana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » Tel Aviv dia nantsoina hoe tanàna vaovao lafo indrindra eran-tany hipetrahana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao momba ny lamaody • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Desambra 1, 2021
Ny mpitarika tamin'ny taon-dasa – Paris – dia nilatsaka ho faharoa, nanaraka akaiky an'i Singapore. Anisan'ireo tanàna hafa ao amin'ny 10 ambony indrindra lafo indrindra dia, nifandimby, Zurich, Hong Kong, New York, Genève, Copenhague, Los Angeles, ary Osaka.
Sampana fitsikilovana ara-toekarena (EIU) namoaka ny vidin'ny vidim-piainana maneran-tany tamin'ny Desambra 2021 omaly, ary tena manafintohina ny tanàna vaovao lafo vidy indrindra eran-tany, araka ny filazan'ny EIU.
Ny fanadihadiana nataon'ny EIU dia nanombana ny vidim-piainana manerana ny tanàna 173 maneran-tany ary nampitaha ny vidin'ny vokatra sy serivisy 200 mahery isan'andro.
Israely Tel Aviv voahosotra ho tanàna lafo vidy indrindra hipetrahana eran-tany, mitsambikina eo amin’ny laharana voalohany, avy amin’ny toerana fahadimy tamin’ny taon-dasa, sambany.
Araka ny EIU, Tel Aviv Niakatra ny laharana noho ny fisondrotry ny vola Israeliana, ny sekely, “nitombo ny dolara [US] tamin'ny fandefasana vaksiny COVID-19 nahomby nataon'i Israely”, izay iray amin'ireo haingana indrindra eran-tany.
Ny sekely israeliana dia niakatra 4% raha oharina amin'ny dolara amerikana tamin'ny fiandohan'ny volana lasa teo, izay nahatonga ny vidin'ny saika ny ampahafolon'ny entana hiakatra. Ny saran'ny sakafo sy ny fitaterana no voa mafy indrindra.
Ny mpitarika tamin'ny taon-dasa – Paris – dia nilatsaka ho faharoa, nanaraka akaiky an'i Singapore. Anisan'ireo tanàn-dehibe hafa ao amin'ny 10 ambony lafo indrindra dia, nifandimby, Zurich, Hong Kong, New York, Genève, Copenhague, Los Angeles, ary Osaka. Nidina ambany indrindra tamin'ny filaharana i Roma, tao anatin'ny fihenan'ny vidin'ny sakafo sy fitafiana.
Ny tanàna miakatra haingana indrindra dia ny renivohitra Iraniana, Tehran, izay nitsambikina toerana 50 ka lasa 29, tao anatin'ny tsy fahampiana sy ny fiakaran'ny vidiny noho ny sazy amerikana. Damaskosy, Syria no laharana ho tanàna faran'izay lafo indrindra tamin'ny fanadihadiana.
Amin'ny ankapobeny, ny EIU Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny fahatapahan'ny rojo famatsiana, ny fiovan'ny fangatahan'ny mpanjifa, ary ny fiovaovan'ny tahan'ny fifanakalozana tamin'ny taon-dasa dia nampitombo ny vidim-piainana any amin'ireo tanàn-dehibe maro eran-tany, ary ny mpandinika dia manantena ny hiakatra bebe kokoa amin'ny taona ho avy. Ny fiakarana lehibe indrindra dia voarakitra tamin’ny fitaterana, ka niakatra 21% ny vidin’ny lasantsy isaky ny litatra.
Ary koa, araka ny tarehimarika EIU, ny tahan'ny fisondrotry ny vidim-piainana narahiny no haingana indrindra voarakitra tao anatin'ny dimy taona lasa, niakatra avy amin'ny 1.9% tamin'ny 2020 ka hatramin'ny 3.5% isan-taona hatramin'ny Septambra 2021.
Tourism Seychelles dia nanao fivoriana ara-barotra voalohany tamin'ny taona 2022 Janoary 25, 2022
Birao vaovao voafidy ho an'ny mpikambana ao amin'ny UNWTO Janoary 25, 2022
Nanakatona ny seranam-piaramanidina Istanbul ny orampanala be dia be Janoary 25, 2022
Maika tsy navoaka: Departemantam-panjakana Amerikana momba ny Fandrahonana Rosia Okraina & Fanafihana UAE Janoary 25, 2022
Filohan'ny Tambajotran'ny Fizahantany Vaovao Manerantany momba ny Fifandraisan'ny Governemanta Janoary 25, 2022
Mpizahatany holandey voatazona rehefa avy nanao fiarahabana Nazi tany Auschwitz Janoary 25, 2022
Minisitra Bartlett: Misedra firoboroboan'ny hotely lehibe indrindra ao anatin'ny herintaona i Jamaika Janoary 24, 2022
Dr. R. Kenneth Romer no nantsoina ho tale jeneraly lefitry ny Minisiteran'ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Aviation Bahamas Janoary 24, 2022
Nampitandrina ny Amerikanina ny hisoroka ny fitsangatsanganana any Rosia ankehitriny Janoary 24, 2022
Mitaky evolisiona ny fanarenana ny dia vaovao Janoary 24, 2022
Ilay Mpizahatany Vaovao: Mitady tanjona rehefa misokatra indray izao tontolo izao Janoary 24, 2022
2022 State of the Hotel Industry Report Janoary 24, 2022
Minnesota dia maniry ny ho toerana halehanao amin'ny Andro fialan-tsasatra nasionaly Janoary 24, 2022
Tokony ho voamarina ve ny mpitantana ny tranonao? Janoary 24, 2022
Ny Minisiteran'ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Aviation Bahamas dia manendry an'i Latia Duncombe ho tale jeneraly mpisolo toerana Janoary 24, 2022
Nofy ratsy tamin'ny PR: Manery ny mpiasan'ny sidina hihena ny Emirates Janoary 24, 2022
Tsy nety niverina tany Etazonia ny sambo sambo, nitady fialofana tany Bahamas Janoary 24, 2022
UK hamarana ny fitsapana COVID-19 ho an'ireo mpitsidika efa vita vaksiny tanteraka Janoary 24, 2022
Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra eran-tany ho an'ny taona 2022 Janoary 24, 2022